I-Word Class Inkcazo kunye nemizekelo
Ngegrama yesiNgesi, igama leklasi liluhlu lwamagama abonisa iimpawu ezifanayo ezisemthethweni, ngokukodwa ukutshatyalaliswa kwazo nokusabalalisa.
Igama legama leklasi lifana nelinye ixesha eliqhelekileyo lentetho yentetho . Kukwahlukileyo nangokuthiwa ngodidi lwegrammatical, uluhlu lweexical , kunye necandelo lobugcisa (nangona le migaqo ayinjalo ngokupheleleyo okanye iphela ngokufanayo).
Iiklasi ezimbini eziphambili zeeklasi zegama zi (1) iilakisi (okanye ivule okanye ifom ) iiklasi (izibizo, izenzi, izichazi, izihlomelo) kunye (2) nomsebenzi (okanye ukuvalwa okanye isakhiwo ) iiklasi (izigqibo, iincinci, izibhengezo kunye nabanye) .
"Xa iilwimi zaqala ukujonga ngokucacileyo isiNgesi nesakhiwo segrama kwiminyaka ye-1940 neye-1950, zahlangabezana neengxaki ezininzi zokwazisa kunye nencazelo yokuba inxalenye yendima yokuthetha yayifumaneka kungekudala. yentetho, kodwa ichazwa ngokwemiqathango eqinileyo yeelwimi. " (UDavid Crystal, iCambridge Encyclopedia yoLwimi lweNgesi , u-2 we-Cambridge University Press, 2003)
"Ayikho indlela echanekileyo yokuhlalutya amagama kwiiklasi zamagama .
" AbaGramari abavumelani nemida phakathi kweeklasi zegama (jonga i- gradience ), kwaye akusoloko icacisa ukuba ngaba kunye namacandelo amancinci kunye okanye ukwahlula. Ngokomzekelo, kwezinye izigrama .... ... baphathwa njengegama elilodwa legama. " (Bas Aarts, uSyvia Chalker, uEdmund Weiner, i -Oxford Dictionary yesiXhosa yoLwimi , wesi-2 i-Oxford University Press, 2014)
Iiklasi zeFomu kunye neeklasi zeZakhiwo
"[Uluhlu] phakathi kwegama kunye negrammatical definition luchaza isahlulo sokuqala kwisigaba sethu: amagama omgangatho wamagama kunye namagama eklasi lobunzima. Ngokubanzi, iiklasi zeefom zinika umxholo wokuqala weexical; iiklasi zenkalo zichaze ulwalamano lwegrama okanye ulungelelaniso.
Singacinga ngamagama eklasi lohlobo njengetena zeelwimi kunye nesakhiwo samagama njengomdongwe obabamba ndawonye.
AMAKHASI EFOMU ( eyaziwa ngokuba yi- CONTENT AMAZWI okanye AMAKCASO OKUVULEKILEYO)
AMAKCAZA OKUQALA ( owaziwa nangokuthi IIMISEBENZI ZAMAGAMA okanye AMAKHASO OKUVAKILEYO)
Isihlanganisi ( okanye idibaniselwano)
Ukwahlula okukrakra kakhulu phakathi kweeklasi zeefom kunye neeklasi zakhiwo zibonakaliswa ngamanani abo. Ngesiqingatha sezigidi okanye amagama angakumbi ngolwimi lwethu, amagama esakhiwo-kunye nezinye izinto eziphawulekayo-zingabalwa kwamakhulu. , nangona kunjalo, zinkulu, iiklasi ezivulekileyo; izibizo ezitsha kunye nezenzi kunye nezichazi kunye nezivakalisi zifaka rhoqo ulwimi njengeteknoloji entsha kunye neengcinga ezintsha zifuna. " (UMartin Kolln noRobert Funk, ukuqonda igrama yoLwimi lwesiNgesi .) U-Allyn noBacon, ngo-1998)
ILizwi elinye, iiKlasi ezininzi
Kwizinto ezininzi, sinokunika kuphela igama kwigumbi xa sifumana nalo kumxholo. Kukhangela isenzi esithi ' Kubukeka kuhle,' kodwa igama elithi 'Unalo lijonge '; oko kukudibeneyo' Ndiyazi ukuba basemaphandleni, 'kodwa isivakalisi esithi' Ndiyazi ukuba 'kunye nesigqibo esithi' Ndiyamazi loo mntu '; uyabakhubekisa, 'kodwa inamba e-'Sinika esinye isizathu esihle.' "(USidney Greenbaum, i- Oxford Xhosa Grammar .
I-Oxford University Press, 1996)
"Siyaqaphela iklasi yegama ngokusetyenziswa kwalo kumxholo. Amanye amagama anesigxina (ukugqitywa kwongezwa ngamagama ukwakha amagama amatsha) anceda ukubonisa uphawu lweklasi abahlala kuyo. Ezi zihlomelo azanele ngokwabo ukuchonga iklasi igama, umzekelo wesisombululo ( ngokukhawuleza, ngokuziqhenya ), kodwa sifumanisa esi sihlomelo kwizichazi: ngokukhohlakeleyo, ngokuzithobayo, kwindoda . Kananjalo ngamanye amaxesha siyakwazi ukuguqula amagama ukusuka kwelinye iklasi ukuya kwelinye nangona zinezikhalazo eziqhelekileyo zeklasini yazo yasekuqaleni: injiniya, kwinjineli ; impendulo engalunganga, i-negative . " (Sidney Greenbaum kunye noGerald Nelson, Isingeniso kwisiGrike soLwimi , umhla we-3 u-Pearson, 2009)
"[N] onke amalungu eklasi aya kuba nawo onke amanqaku achaza.
Ubulungu beklasi ethile ngokwenene ngumcimbi wezinga. Kule nkalo, igrama ayiyiyo eyahlukileyo kwilizwe lenene. Kukho imidlalo ebonakalayo efana nebhola lebhola kwaye ayikho imidlalo yezemidlalo efana 'neentsimbi.' Kukho izilwanyana ezinobomi ezifana 'neenja' kunye neentlobo ezinjenge-'platypus.' Ngokufanayo, kukho imimiselo emihle yesenzi njengemilindo kunye nemizekelo enobungqina enokuqaphela; izibizo ezinjengeesihlalo ezibonisa zonke iimpawu zesibizo esiqhelekileyo kunye nezinye ezingekho ezintle ezifana noKenny . "(uKersti Börjars kunye noKate Burridge, Ukuzisa isiNgesi , i-2nd ed.
Ulwimi olwakhiwe (conlang)